DAAWO: Ka bogo laacibiintii Ronaldo ka hor sacab ka mutaystay taageerayaasha lidka ah! – Gool FM
DAAWO: Ka bogo laacibiintii Ronaldo ka hor sacab ka mutaystay taageerayaasha lidka ah!
(Madrid) 04 Abriil 2018 – Ronaldo ayaa xalay waxaa sacab ula istaagey taageerayaasha kooxda Juventus oo ah kooxdii xalay ugu dambaysay dhibbanayaashiisa, wuxuuna ka dhaliyay kubad dhabal ahayd oo aad u qurxoonayd.
Haddaba marka laga soo tago Cristiano Ronaldo, waa kuwee xiddigaha kale ee ay u sacbiyeen taageerayaasha lidka ah?
Gool mideeya midabbada kala duwan iyadoon loo eegayn cidda laga dhaliyay iyo cidda loo dhaliyay aan soo qaadanno isla laacibka kasoo jeeda jasiiradda Madeira oo ay Anfield ugu sacbiyeen taageerayaasha Liverpool sanaddii 2015 kaddib gool qurux badan oo uu dhaliyay.
CR7 waxaa sidoo kale wehliya Ronaldinho, Totti iyo Del Piero. Waxay ahayd 2005 goortii uu laacibkan reer Brazil uu seddexleey ka dhaliyay gegada Bernabeu taasoo keentay inay si kal iyo laab ah u sacbiyaan taageerayaasha kooxda Cadcadka ee Los Blancos oo fooridii sacab u beddeley.
Bishii Nofeember 5, 2008 waxaa si gaar ah u xusuusta reer Juventus iyadoo Delpiero oo 2 gool ka dhaliyay kooxda Real uu goolashiisa sacab kaga mutaystay taageerayaasha Real oo u istaagey markii uu bedelayay De Ceglie.
Halka 8 sano kaddib ay kuwa Barcelona sacab ula istaageen kabtanka Romanista-ha ah ee kooxda Roma ee Totti oo garoonka soo galay, gool uu dhaliyayna uguma sacbinin ee qiimayn ay u hayaan ayay ugu sacbiyeen.
Isla magaalada Madrid, gaar ahaan dhanka cas ee Atletico, taageerayaasha Colchoneros ayaa sacab ula istaagey laacibka Barcelona ee Leo Messi 6-dii bishii Jannaay, 2009, oo ay halkaa ka dhacaysay lugta hore ee Copa del Rey, markaasoo uu Pulce seddexleey ku dhamaystiray kubbad uu ku khiyaanay Martian taasoo taageerayaasha caddaan casaanka khasab kaga dhigtay inay u sacbiyaan.
Waxay sidoo kale ka dhacday tiyaatarka kubadda cagta Talyaaniga ee San Siro, halkaasoo ay tageerayaasha Milan u sacbiyeen Roberto Baggio oo halkaa ku dheelayay ciyaartiisii ugu dambaysay isagoo u safnaa Brescia.
Gareth Bale oo xalay ku la kacay Ronaldo wax ay ka xishoodeen taageerayaasha Juventus (MUUQAAL)